गेमि forका लागि सर्वश्रेष्ठ Z390 मदरबोर्ड्स - २०२० (समीक्षा) - सूची
Z390 मदरबोर्ड्सले सबै भन्दा राम्रो मा वर्ग प्रदर्शन संग एक तूफान द्वारा दुनिया लेयो। तिनीहरू अत्यधिक प्रशंसित मदरबोर्डहरू हुन जुन प्रोसेसरहरूको पछिल्लो पीढी समर्थन गर्दछ। इंटेलले z390 चिपसेटको परिचय चाँडै ज wild्गली आगोको रूपमा फैलियो, र शीर्ष-स्तरका निर्माताहरूले दौडमा भाग लिने निर्णय गरे।
MSI, Asus, र Gigabyte जस्ता ठूला नामहरू पनि तपाईंलाई प्रीमियम छनौटहरू ल्याउन रोजे। जे होस्, यसले छनौटहरूको अलमल्ल पार्ने दायरामा पुर्‍यायो। आज, तपाईंसँग बजारमा धेरै z390 मदरबोर्डहरू छन्, र तिनीहरू मध्येबाट उत्तम विचार गर्न यो समान चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ।
जे होस्, यो उत्तम Z390 मदरबोर्डहरूसमीक्षाले विश्वको कुनामा तपाईले शीर्ष चयन ल्याउँछ। तपाईले कहिँ पनि हेर्नुपर्दैन किनकि यस समीक्षाले तपाईलाई प्रत्येक मदरबोर्ड सम्बन्धी संक्षिप्त जानकारी प्रदान गर्दछ। थप रूपमा, त्यहाँ एक खरीददार गाईड छ, र केहि सामान्य प्रश्नहरू प्रश्नहरू तपाईंलाई एक सूचित निर्णय लिन मद्दत गर्न।
सर्वश्रेष्ठ एन्ड्रोइड टिभी बक्स - खरीद मार्गनिर्देशन
यस पीछा को लागी काटौं र शुरू:
समीक्षाको साथ सर्वश्रेष्ठ Z390 मदरबोर्ड्स (२०२०):
१. MSI Z390-A Pro
सूचीको शीर्षमा, तपाईंसँग एमएसआईको एक आकर्षक विकल्प छ किनकि यसले पछिल्लो। लाई समर्थन गर्दछthर 9thइंटेलबाट जेनरेशन प्रोसेसर। प्रोसेसर छनौटहरूको विस्तृत दायराको लागि तपाई पेन्टियम गोल्ड र सेलेरनसँग मिल्छ। यो DDR4 हो, जसले Z390 गति र प्रदर्शनमा यसलाई मानक बनाउँछ।
तपाइँ over.4 गिगाहर्ट्ज सम्म ओभरक्लोक समर्थन गर्न मेमोरी पाउनुहुन्छ, यसलाई उच्च प्रदर्शनको छनौट बनाउँदै। यो सबै पछिल्ला USB पोर्टहरू र Gen2 समर्थनको साथ आउँदछ। विस्तारित हेटसिink्क मदरबोर्डका लागि राम्रो ताप ताप्न प्रदान गर्न एक योग्य थप हो।
यसमा प्रोसेसिंग एकाईमा अधिकतम प्रसारण सुनिश्चित गर्न MSI को हस्ताक्षर कोर को बढावा छ। टर्बो M.2 ले एसएसडीमा 32 जीबीपीएस डाटा ट्रान्सफरको सुनिश्चित गर्दछ। MSI को हस्ताक्षर लिदै, यसमा HD र पृथक ध्वनि मोड्युलहरू छन् सम्म 8 च्यानल समर्थनको साथ त्रुटिहीन गुणवत्ता प्रदान गर्न।
जे होस्, यो निश्चित रूपमा 'बेस्ट-इन-क्लास' होईन किनकि यो मानक एकीकरणको साथ प्रविष्टि-स्तर Z390 हो। तसर्थ, यो एक बजेट मैत्री विकल्प हो र Z390 मदरबोर्ड जाँच गर्न चाहनेहरूको लागि पर्याप्त छ।
MSI को निर्माण गुण
प्रयोगकर्ता मैत्री BIOS
ओभरक्लोकिंग प्रेमीहरूको लागि महान
उल्लेखनीय सफ्टवेयर समर्थन
एक शुरुआत-अनुकूल विकल्प छैन। सेटअपको लागि तपाइँसँग अनुभव हुन आवश्यक छ
प्रयोगकर्ता म्यानुअल स्पष्ट छैन
२. MSI MPG Z390 गेमि Ed एज
यदि तपाईं अघिल्लो मदरबोर्ड मन पराउनुहुन्छ तर केहि सुधार र 'MSI हस्ताक्षर,' को अधिक चाहान्नुभयो भने यो निश्चित रूपमा बिल फिट हुनेछ। यो मदरबोर्ड सबैको साथ आउँदछ जुन अघिल्लोमा थियो, जस्तै।thजेन 9thजेन प्रोसेसर समर्थन, र पावर प्याक प्रसारणको लागि नयाँ पोर्ट।
यद्यपि यो दुई M.2 पोर्ट र अधिक USB 1.१ Gen2 पोर्ट प्राप्त गर्दछ तपाईंको कनेक्टिविटी आवश्यकताहरू पूरा गर्न। अवश्य पनि, MSI को सौंदर्यशास्त्र बिना मदरबोर्ड के हुन्छ? यहाँ तपाईंसँग पूर्ण रूपमा अनुकूलन योग्य अनुभव सुनिश्चित गर्न RGB नियन्त्रणको साथ हस्ताक्षर फकीर बत्तीहरू छन्।
यसका साथै, निर्मित ब्लुटुथ र वाइफाइ कनेक्टिभिटी मोड्युलहरूले तपाईंलाई त्रुटिपूर्ण जडान गति र शक्ति ल्याउँछ। ध्वनी प्रदर्शन को उच्च गुणवत्ता को वितरण गर्न पृथक अडियो मॉड्यूल मा एक अपग्रेड छ। विस्तारित heatsink र ढाल इस्पात कनेक्टर्स तपाईं प्रदर्शन संग लचिलोपन ल्याउन।
तपाईं सजिलै धेरै GPUs थप्न सक्नुहुनेछ, मेमोरी बूस्टबाट उल्लेखनीय शक्ति पाउनुहोस्, र ओभरक्लोक। यो एक धेरै कडा निर्माण र एक अत्यधिक मैत्री BIOS छ। यदि तपाईं ओभरक्ल प्रेमी हुनुहुन्छ भने, यसले तपाईंलाई निराश पार्दैन। जबकि माथि दिइएका मदरबोर्ड सबैको प्राथमिकता फिट हुन सक्छ, यो एक निश्चित रूपमा तपाइँको सबै Z390 आवश्यकताहरु लाई सन्तुष्ट।
अनुकूलनको लागि कम्पोनेन्टहरू, र्याम्स, र प्रोसेसरहरूको विस्तृत विकल्पहरू
बिल्ट-इन ल्यान र ब्लू टुथले बक्स बाहिर काम गर्दछ
Z390 मदरबोर्डहरूको प्रदर्शन अपेक्षा पूरा गर्दछ
Z390 मदरबोर्डको लागि अलि भारी र फराकिलो निर्माण
अन्य मदरबोर्डहरू भन्दा उच्च तापमान कायम राख्छ
G. गिगाबाइट जेड 90 90 ० यूडी
गीगाबाईटीले यसलाई निस्किरहेको छ यो Z390 मदरबोर्डहरूमा एक शानदार थपको साथ। यहाँ तपाईंसँग प्रदर्शन, गति, थर्मल, र एकल चयनमा मानको सन्तुलित संयोजन छ। यो पछिल्लो to लाई समर्थनको साथ आउँदछthर 9gen प्रोसेसर, i3 बाट i9, सेलेरन, र पेन्टियम सहित। अद्वितीय VRM डिजाइनहरूले यसलाई आठ कोर प्रोसेसर समर्थन गर्न सक्षम गर्दछ।
+ + Pin पिन हेडरको साथ तपाई आफ्नो पीसीको लागि कुनै अन्य जस्तो कन्फिगरेशनको पूर्ण दायरा पाउनुहुनेछ। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, यो स्मार्ट फ्यान controls नियन्त्रणहरू र शीतलन आवश्यकताहरू पूरा गर्न अनुकूलताको साथ आउँदछ। यसैले, तपाई मदरबोर्डका लागि उच्च प्रदर्शनको निरन्तर वितरणको लागि यसलाई सिमलेस राख्न सक्नुहुनेछ।
परम्परागत पिनहरू ठोस पिनसँग प्रतिस्थापन गरिन्छन् ताकि प्रयोगकर्ता कन्फिगरेसनका लागि टिकाऊपन सुनिश्चित गर्न सकिन्छ। तपाईंले मदरबोर्डलाई शारीरिक रूपले हानी पुर्‍याउने बारेमा चिन्ता लिनु पर्दैन। यो अल्ट्रा टिकाऊ कवच छ कि पुष्टि गर्दछ। वाइफाइ ल्यान समर्थनको साथ आउँदछ, र M.2 डूबको साथ, तपाईंसँग राम्रोसँग परिचित सीपीयू छ।
अवश्य पनि, यस मदरबोर्डले प्रदर्शन सुनिश्चित गर्न भागहरूको दायराका लागि सौंदर्यशास्त्रमा एक प्रहार गर्दछ। तपाईं मोडेलको भिजुअल अपीलको सर्तमा धेरै आशा गर्न सक्नुहुन्न। यदि तपाइँ यसको बारेमा चिन्ता गर्नुहुन्न भने, यो कुनै पनि हिसाबमा तपाईलाई हेर्नु यो उत्तम छनोट हो।
प्रयोग गर्न सजिलो र धेरै प्रयोगकर्ता-अनुकूल छनौट
क्षति प्रतिरोध गर्न ठोस पिनको साथ टिकाऊ निर्माण
सीधा सेटअप र Z390 मदरबोर्डको कार्य
BIOS प्रयोगकर्ता-मैत्री छैन र प्रयोग गर्न केहि समय लिन सक्दछ
त्यहाँ अन्य जडानको लागि कुनै पनि निर्मित वाइफाइ वा प्रदर्शन पोर्ट छैन
G. गिगाबाईट Z390 अरोस प्रो वाई-फाई
फेरि फेरी, तपाईले सूचीमा अघिल्लो विकल्पको अर्को अपग्रेड गरिएको संस्करण पाउनुहुनेछ। यो एक परम्परागत 10 +2को सट्टामा 12 +2VRM डिजाइनको साथ आउँदछ। यसले विश्वव्यापी अनुकूलता र प्रोसेसरबाट निर्दोष प्रदर्शन सुनिश्चित गर्दछ, किनकि यदि तपाईंले विशिष्ट विवरणहरू सही पाउनुभयो भने5GHz सम्म प्रदर्शन गर्न सक्नुहुन्छ।
यो कुनै पनि जडान आवश्यकता पूरा गर्न लगभग २ जीबीपीएस गति क्षमताको साथ बिल्ट-इन वाइफाइको साथ आउँदछ। यो मानक स्मार्ट fan फ्यान समर्थनको साथ आउँदछ RGB LEDs को नयाँ थपको साथ। त्यो सहि छ! तपाईं LED बत्तीको एक रचनात्मक एकीकरण पाउनुहुन्छ जुन मदरबोर्डको मोनोक्रोम स्कीमको साथ धेरै राम्रोसँग काम गर्दछ।
योसँग डुअल थर्मल M.2 गार्ड छ र DDR4 मेमोरीको लागि डुअल च्यानल समर्थन गर्दछ। यदि तपाइँ सबै सुविधाहरू, अनुकूलन, प्रसारण, र भोल्टेज समर्थन संयोजन, यो मदरबोर्ड निस्सन्देह यसको अत्यधिक प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण संग पकड को लागी छ।
एक भारी शुल्क मदरबोर्ड
सर्वश्रेष्ठ भोल्टेज प्रावधानको लागि प्रीमियम-ग्रेड घटकहरू
कनेक्टिविटी आवश्यकताहरूसँग मेल खाने धेरै USB पोर्टहरू र अन्य पोर्टहरू
विस्तृत तापमान अनुगमनको लागि बहु तापमान सेन्सरहरू
BIOS सहज छैन र प्रयोग गर्न समय लिन्छ
कुनै डिबग एलईडी वा पावर सीएमओएस छैन
AS. ASUS Prime Z390-A मदरबोर्ड
यदि भिडियो र ग्राफिक्स तपाईंको आवश्यकता हो भने, के ASUS र के यो Prime Z390 सूचीमा मिल्दछ? यो शानदार उत्कृष्ट कृतिले तपाइँलाई Z390 ले प्रस्ताव गर्न सक्ने सबै कुरा ल्याउँदछ। तपाइँ PCI express.० एक्सप्रेस र २.० ब्यान्डविथको साथ उच्च गति जडान पाउनुहुन्छ। M.2 जसले 32 जीबीपीएसको गतिको समर्थन गर्दछ क्लास यूएसबी 1.१ मा टाइप गर्दछ र बहुमुखी हुन टाइप सी।
कूलर बिल्डको साथ ओपटाइम २ डिजाईनले अत्यधिक तापक्रम प्रतिरोधी बनाउँदछ किनकि यसले तापमानलाई अधिक प्रभावकारी रूपमा नियमित गर्दछ। यसैले, तपाईं ओभरक्लोभ बढाउन सक्नुहुनेछ, जुन कुनै पनि अघिल्लो मदरबोर्डलाई पार गर्छ। अवश्य पनि, तपाईं कसरी हस्ताक्षर भुल्न सक्नुहुन्छ पाँच-बाटो अनुकूलन Asus को लागि परिचित छ।
एआई अनुकूलन सुइट overclocking, गर्मी नियन्त्रण, र स्वचालित प्रदर्शन को लागी बुद्धिमान नियंत्रण सुनिश्चित गर्दछ। Asus Prime Z390 अगाडि तपाईलाई ध्वनि मोड्युलहरूको लागि रियलटेकको साथ साझेदारी गरेर उत्तम-इन-क्लास ध्वनि प्रदर्शन गर्दछ। त्यो सबै होइन! तपाइँ एलईडी बत्तीको साथ एक आधुनिक अपील को लागी महान दृश्यहरु र सौंदर्य डिजाइन प्राप्त गर्नुहोस्।
एक अपवादात्मक मध्य-स्तर Z390
भिडियो सम्पादन र ग्राफिक डिजाईन प्रदर्शनको लागि उत्तम विकल्प
पैसाको लागि उच्च मूल्य
सम्मोहक सुविधाहरूको पूर्ण
BIOS र ड्राइभरहरूलाई म्यानुअल अपडेट आवश्यक पर्दछ
अपडेटले BIOS र ड्राइभरहरू प्रयोग गर्न अलि जटिल बनाउँछ
AS. ASUS Prime Z390-P
तपाई सायद सोचिरहनु भएको छ कि त्यहाँ अर्को Asus प्राइम किन छ? ठिक छ, यो एक प्रविष्टि-स्तर लगानीमा उच्च-अन्त प्रयोगकर्ताहरूका लागि हो। यो एक पीसी निर्माणकर्ताहरूको लागि उत्कृष्ट विकल्प हो जसले उनीहरूको एकाईलाई अनुकूलन गर्न मन पराउँछन्। चाहे तपाईं एक शुरुआतकर्ता हो वा एक मध्यवर्ती प्रणाली बिल्डर, यो एक अत्यधिक उपयुक्त विकल्प हो।
अघिल्लो डिजाइन जस्तै, तपाईं अल्ट्रा-फास्ट कनेक्टिभिटी विकल्प र उल्लेखनीय मेमोरी एन्हान्समेन्ट पाउनुहुन्छ जुन उत्कृष्ट-इन-क्लास ओभरक्लोकिंग प्रदान गर्दछ। तपाईं त्रुटिपूर्ण डाटा ट्रान्सफर र अधिक लचिलो डिजाइन पाउनुहुन्छ जुन Asus को हस्ताक्षर हो। दृश्यहरु र सौंदर्यशास्त्र एक उल्लेखनीय प्रदर्शन को साथ यहाँ एक चिमटा प्राप्त भयो।
यद्यपि यो बजेटमैत्री छ, यसले विभिन्न विभागहरूमा पोर्टहरूको संख्यामा थोरै प्रहार गर्दछ। ती मध्ये धेरै मानक चार हो। यो एटीएक्स स्तर मदरबोर्ड हो जुन छ स्क्रूको कम स्थिर एकीकरणको साथ छ, जुन केहि प्रयोगकर्ताहरूको लागि अनसेट हुने छ। समग्रमा, यो पैसाको लागि उच्च मूल्य हो।
पैसा र उच्च प्रदर्शनको लागि उच्च मूल्य
प्रयोगकर्ताहरूको लागि पूर्ण अनुकूलनयोग्य
पीसी निर्माणकर्ताहरूको लागि उत्कृष्ट विकल्प
गेमि and र ग्राफिक्स आवश्यकताहरू पूरा गर्दछ
समर्थन गर्दछ 8thर 9thजेन प्रोसेसर, आई-प्रोसेसर सहित
निर्माण कम्पोनेन्टहरूले प्लास्टिक समेकनको साथ एक सानो वृद्धि गरे
त्यहाँ सीमित पोर्ट र कनेक्टिभिटी छ कि पूर्ण निर्माण निर्माण प्रतिबन्धित गर्न सक्दछ
AS. ASRock मदरबोर्ड Z390
यदि तपाइँ प्रीमियम ब्रान्डहरू भन्दा अधिक बजेट-अनुकूल विकल्पहरूको खोजी गर्दै हुनुहुन्छ भने, ASRock मा मदरबोर्डहरूको लागि उत्कृष्ट विकल्प छ। यो एक आधारभूत प्रविष्टि मानक Z390 मदरबोर्ड को सबै सुविधाहरुको साथ छ। तपाईं उस्तै कनेक्टिभिटी, overclocking, र के केहि प्राप्त गर्नुहोस्। जे होस्, तपाईले उच्च फाईदा Z390 ले प्रदान गर्न सक्ने पूर्ण बेवास्ता गर्न सक्नुहुन्छ।
धेरैजसो मदरबोर्डहरूको विपरीत, त्यहाँ एक उल्लेखनीय सुविधा छ। यससँग GB 64 जीबी सम्मको डबल मेमोरी समर्थन छ, र यसले यसलाई अलग पार्दछ। यो एक धेरै सन्तुलित प्रदर्शन छ र सीमित शीत विकल्पहरू छन्। यदि तपाईं Z390 को अपग्रेडमा आनन्द लिन चाहनुहुन्छ भने कुनै गेमिंग र ग्राफिक्स विचार बिना नै, यो एक काम पूरा हुनेछ।
अवश्य पनि, यदि तपाईंसँग अनौपचारिक प्रदर्शन र गेमि। आवश्यकताहरू छन् भने, यसले तपाईंलाई निराश पार्दैन। समग्रमा, यो ती पीसी प्रयोगकर्ताहरूको लागि हो जुन अप टु डेट रहन मन पर्छ तर लगातार पीसी प्रयोग गर्दैन। सापेक्षिक रूपमा, यदि तपाइँ एक काम गर्ने पेशेवर हुनुहुन्छ, यो एक सस्तो विकल्प हो।
उत्तम प्रविष्टि-स्तर विकल्प
G 64 जीबीपीएस मेमोरी समर्थन
बजेट मैत्री र पैसा को लागी मान
प्रासंगिक पीसी प्रयोगकर्ताहरूको लागि महान
व्यावसायिक आवश्यकताहरूको साथ पालन गर्दछ
Z390 मदरबोर्डको पूर्ण लाभ प्रदान गर्दैन
यो सामयिक खेल र ग्राफिक्स आवश्यकताहरूको लागि उपयुक्त छ
EV. EVGA Z390 अँध्यारो
लगभग सबै माथिको दिईएको मदरबोर्ड मध्य-स्तरमा केहि उच्च-सम्भावनाहरूको साथ प्रविष्टिहरू छन्। जे होस्, यो एक वास्तविक रूपमा सर्वश्रेष्ठ श्रेणीमा Z390 मदरबोर्ड सूचीमा छ। यसले तपाईं लाई पूर्ण सुविधा र उच्च ग्रेड प्रदर्शन ल्याउँछ। यदि तपाई वास्तवमा यसको महिमामा Z390 अनुभव गर्न चाहानुहुन्छ भने तपाईले यो पाउनु पर्छ।
सिधा ब्याट बाहिर, तपाईं एक 24-पिन सीपीयू पावर को लागी 8-पिन संग पावर कनेक्टर छ। तपाईं 2DIMM डुअल-चैनल मेमोरीको साथ ओभरक्लोकिंगको उल्लेखनीय 6.6 गीगाहर्ट्झ पाउनुहुन्छ। त्यहाँ धेरै प्रकार ए, प्रकार सी पोर्टहरू, र लगभग USB यूएसबी 1.१ जेन २ पोर्टहरू छन्। आधुनिक जडान आवश्यकताहरू पूरा गर्न।
तपाईं छवटा SATA सम्म एकीकृत गर्न सक्नुहुनेछ। त्यहाँ २ M.2 र मेमोरी समर्थन GB२ GBSP सम्म छ। त्यहाँ निर्मित ब्लुटुथ, वाइफाइ, र अतुलनीय अडियो समर्थन छ। यसमा एलईडी र एक चिकना म्याट फिनिश छ जुन लाइटहरू र व्हाटट्यानसँग उल्लेखनीय रूपमा राम्रोसँग काम गर्दछ। तपाइँ पूर्ण CPU तथ्या receive्कहरू प्राप्त गर्न LEDs, प्रदर्शनहरू, र अन्य मोनिटर सेटअपहरूमा पूरा समर्थन पाउनुहुन्छ।
यो डिजिटल VRM को 17 चरणहरु र इंटेल Optane मेमोरी अनुकूलता संग आउँछ। तपाईं 5.१ च्यानल एचडी अडियो + EVGA न्यू ऑडियो पनि पाउनुहुन्छ। त्यहाँ भर्खरको डुअल-ब्यान्ड वाइफाइ र सबैभन्दा नयाँ ब्लुटुथ .0.० छन्, र तपाइँ प्रबलित PCIe स्लटहरूको साथ सकेट सकेट सुन सामग्री प्राप्त गर्नुहुन्छ। त्यहाँ केहि फेलसेफ विकल्पहरू छन्, जस्तै SafeBoot बटन पछिल्लो ज्ञात रीसेट सुनिश्चित गर्न।
यसलाई संक्षिप्तमा राख्नको लागि, यसले तपाईंलाई Z390 मदरबोर्डले प्रायः सबै भन्दा राम्रोसँग मिल्दो मद्दतको साथ प्रस्ताव गर्न सक्ने सबै चीज ल्याउँदछ। निस्सन्देह, यो त्यति नै महँगो पनि छ।
पूर्ण कनेक्टिविटी र सुविधाहरूको दायरा
निगरानी आवश्यकताहरू पूरा गर्दछ
सौन्दर्य अपीलको लागि LEDs, र एक चिकना मोडेल
बेस्ट-इन-क्लास Z390 मोडेल
अन्य Z390 मदरबोर्डहरू भन्दा धेरै धेरै खर्च गर्दछ
प्रणालीमा टोल लिनुहोस् यदि तपाईंले यसलाई पूर्ण क्षमताबाट हटाउनुभयो भने
सर्वश्रेष्ठ Z390 मदरबोर्डका लागि खरीददारहरू गाईडहरू:
अवश्य पनि, बजार निरन्तर विकसित हुँदैछ, र त्यहाँ एक समय आउनेछ जब Z390 एक पुरानो प्रविधि हुनेछ। यदि तपाईं यसलाई किन्नको विचार गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईं यो मिति नाघ्नुभन्दा पहिले करिब years बर्षसम्म रहन अपेक्षा गर्न सक्नुहुन्छ।
त्यहाँ पहिले नै धेरै उत्तम विकल्पहरू छन्, तर तिनीहरूको समान रूपमा अधिक लागत। तसर्थ, यदि तपाईं Z390 मदरबोर्ड विचार गर्दै हुनुहुन्छ भने, निम्न बुँदाहरू दिमागमा राख्नु राम्रो हुन्छ:
१. निर्माण-तयारी विकल्प
Z390 मदरबोर्डको सबै भन्दा अभिन्न पक्ष उपयोगकर्ता मैत्री अनुकूलन हो। त्यसकारण, तपाईंले यो सुनिश्चित गर्नुपर्दछ कि तपाई पीसीसँग के गर्दै हुनुहुन्छ थाहा छ। तपाईं अन्य प्रोफेशनलहरूसँग कार्यमा मद्दतको आशा गर्न सक्नुहुन्न। यो जो निर्माण गर्न सिक्दै छन् वा बिस्तारै आफ्नो सीपीयूमा लगानी गर्न चाहनेहरूका लागि यो उत्कृष्ट विकल्प हो।
२. ओभरक्लोकिंग र मेमोरीलाई विचार गर्नुहोस्
तपाईंले मेमोरी समर्थन र ओभरक्लोकिंग सीमाहरू विचार गर्नुपर्छ यदि तपाईं Z390 मदरबोर्ड चाहानुहुन्छ भने। यो यी पक्षहरूमा ढिलो हुनु हुँदैन, वा तपाईं एक मिति सकिएको मदरबोर्डको साथ समाप्त हुनेछ जुन काम सक्नेछ।
C. कूलर प्रदर्शन
फ्यान समर्थन अभिन्न हो। केही मदरबोर्डहरूले दुई फ्यानहरूलाई उत्तम रूपमा समर्थन गर्दछ। तपाईंलाई अधिकतम तापक्रम कायम गर्न कम्तिमा पनि to देखि five प्रशंसकहरू चाहिन्छ, विशेष गरी प्रदर्शन-भारी कार्यहरूका लागि। त्यस्तै, overclocking ले एक टोल लिन्छ।
Conn. कनेक्टिविटी विकल्प
तपाईं USB उपलब्धतासँग सम्झौता गर्न सक्नुहुन्न किनकि यो एक अपरिहार्य आवश्यकता भएको छ यदि तपाईं बहु उपकरणहरू जडान गर्न चाहानुहुन्छ भने। तपाईसँग ध्वनी प्रणाली, कीबोर्ड, गेमि control नियन्त्रणकर्ता, वा अरू केहि छ, USB महत्वपूर्ण छ। त्यस्तै, SSD वा SATA निर्णायक पनि हो।
आजको डिजिटल युगमा वाइफाइ र ब्लुटुथ कनेक्टिविटीलाई वेवास्ता नगर्नुहोस् जुन तपाईंसँग उच्च-गति उत्कृष्टताको लागि सबैभन्दा नयाँ जडान हुन आवश्यक छ।
Phys. भौतिक पक्ष
आधुनिक सीपीयूको लागि तपाईंलाई कम्प्याक्ट बिल्ड र स्लिम डिजाईन चाहिन्छ। तपाईं यी पक्षहरूलाई बेवास्ता गर्न सक्नुहुन्न, विशेष गरी यदि तपाईं केहि चीज चाहानुहुन्छ जुन हालको सजावट आवश्यकताहरूसँग मिल्दछ। एलईडी र अन्य सौंदर्यशास्त्र बेवास्ता गर्न सम्भव छ यदि तपाईंसँग तपाईंको मदरबोर्ड कभर गरिएको क्याबिनेट छ भने।
उचित संरक्षण र उच्च-ग्रेड कम्पोनेन्टहरू लामो समयदेखि चल्ने मदरबोर्डका लागि सर्वोपरि हुन्। दिइएको जुन तपाईं अनुप्रयोगहरू, खेलहरू, र प्लेटफर्महरू प्राप्त गर्न बाध्य हुनुहुन्छ जुन उच्च प्रदर्शनको आवश्यक छ, तपाईं सस्तो कम्पोनेन्टहरू अति तापीकरण वा ओभरलोडि risk जोखिम लिन सक्नुहुन्न।
अधिकांश Z390 मदरबोर्डहरू पेशेवर र व्यक्तिगत प्रयोगको लागि बजेट-अनुकूल विकल्प हुनेछन्। यो घर पीसी इकाइहरूका लागि उत्कृष्ट हो जहाँ तपाईं सामयिक गेमिंगमा भाग लिन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईं २०१ to देखि २०२० सम्मका खेलहरूको आनन्द लिन चाहनुहुन्छ भने, यसले तपाईंलाई उत्कृष्ट प्रदर्शन प्रदान गर्दछ।
यस बाहेक, यो ग्राफिक्स र भिडियो सम्पादकहरूको लागि राम्रोसँग काम गर्दछ। समग्रमा, यी मानक प्रदर्शनको लागि सही विकल्प हो। यी9को उपयोग को लागी महान होthइंटेलबाट जेन प्रोसेसर।
१ क्यू Z390 मूल्य खरीद गर्दै छ?
बर्ष:यदि तपाईं बजेट व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुनेछ र उच्च-अन्त Z390 मा लगानी गर्न सक्नुहुनेछ भने, यो पक्कै लगानीको लागि लायक छ। Z390 धेरै प्रीमियम-ग्रेड सुविधाहरू र कम्पोनेन्टहरूको साथ आउँदछ जुन तपाईं अन्य मदरबोर्डहरूमा सजीलै फेला पार्न सक्नुहुन्न। यो २०२० मा शुरू गरिएको थियो, त्यसैले तपाईं यसलाई धेरै समर्थन गर्न सक्नुहुन्छ
२Q के Z390 मदरबोर्ड भविष्य-प्रूफ छ?
बर्ष:यदि तपाइँ Z390 मदरबोर्डमा लगानी गर्नुहुन्छ भने, यो कुनै प्रदर्शन स्लक बिना पाँच बर्ष सम्म लामो हुन्छ। यो प्रदर्शन आवश्यकता को सबै भन्दा संग रहनेछ। यद्यपि यो उच्च अन्तमा चश्मा र कन्फिगरेसनको साथ सूचीमा पछिल्लो थपहरू मेल खाँदैन।
3Q। Z390 एक राम्रो गेमिंग मदरबोर्ड छ?
बर्ष:एक Z390 मदरबोर्ड सुविधाहरूको वर्गीकरणको साथ आउँदछ, ओभरक्लोकि,, फ्यान समर्थन, र बहु ​​कनेक्टिभिटी विकल्पहरू सहित जुन यो पीसी गेमरहरूको लागि राम्रो ज्ञान भएको विकल्प हो। तपाईंले धेरै भिन्नता पाउनुहुने छैन, र यदि तपाईंलाई यो सही अनुकूलित गर्ने तरिका थाहा छ भने, यसले धेरै उच्च-खेल गेमिंग पीसीहरू पार गर्न सक्छ वा तिनीहरूलाई मिलान गर्न सक्दछ।
4Q। Z390 को विचार गर्नुपर्छ?
बर्ष:यदि तपाईं एक वफादार इंटेल प्रयोगकर्ता हुनुहुन्छ जसले केवल यो प्रोसेसर मात्र विश्वास गर्नुहुन्छ, Z390 एक उत्तम विकल्प हो। त्यहाँ एएमडी राइजेन र बजारमा अन्य प्रोसेसरहरू छन्। जहाँसम्म कि उनीहरूसँग खेल आवश्यकताहरू भन्दा बढी भएको केही व्यक्तिहरू उनीहरूलाई चलाउन हिचकिचाउँदछन्। उनीहरूको लागि, Z390 व्यावसायिक र व्यक्तिगत प्रयोगको लागि उत्तम श्रेणीमा छ किनकि तपाईं use प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छthर 9thGen इंटेल प्रोसेसर कुशलतापूर्वक।
सधैं तपाईं मदरबोर्ड किन्नु अघि अन्य कम्पोनेन्टहरू र लगानी आवश्यकताहरू विचार गर्न निश्चित गर्नुहोस्। सूचीले प्रविष्टि-स्तर, मध्य-दायरा, र उच्च-अन्त प्रयोगकर्ताहरूलाई विचारमा राख्दछ जुन तपाईंलाई परिचय गराउँछसर्वश्रेष्ठ Z390 मदरबोर्डहरू।आशा छ, यी प्रत्येक एक मूल्यवान जोड को साबित। यदि तपाईंसँग कुनै गडबड छ भने, हुनसक्छ खरीददार गाईड र FAQ हरूले तपाईंलाई यी मदरबोर्डहरू अझ राम्ररी बुझ्न मद्दत गर्दछ।
यस सूचीमा विकल्पहरू छन् जुन तपाईंलाई अप टु डेटमा रहन मद्दत गर्दछ र अन्य असंख्य विकल्पहरूबाट संकुचित हुन्छ। तपाइँ इष्टतम प्रदर्शन स्तरहरू पाउनुहुन्छ। त्यसो भए, शीर्ष ब्रान्डबाट कम-ज्ञात ब्रान्डहरूमा उत्तम छनोटहरू पाउनुहोस्, ती कामहरू प्राप्त गरे पनि।
सर्वश्रेष्ठ क्रस-प्लेटफर्म खेलहरू
के म छात्रमा मेरो स्पोर्टिफ खाता परिवर्तन गर्न सक्दछु?
नि: शुल्क डाउनलोड पूर्ण लम्बाइ चलचित्रहरू
रोबलोक्स कसरी बिक्री आइटमहरू प्राप्त गर्ने
फिल्महरू अनलाइन स्ट्रिमिंग नि: शुल्क हेर्नुहोस्
कलेज विद्यार्थीहरूको लागि प्राइम निःशुल्क हो
कसरी विद्यार्थी प्राथमिक सदस्यता पाउने